FSX ဘိုးအင်း 747-400 Aerolineas အာဂျင်တီးနား Speedbrake ပြဿနာ
FSX ဘိုးအင်း 747-400 Aerolineas အာဂျင်တီးနား Speedbrake ပြဿနာ2နှစ်ပေါင်း2months ago #1112
မင်္ဂလာပါယောက်ျားများ, ကြီးသော်ဆိုက်! ငါမကြာသေးမီကဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါပြီ FSX B747-400 Aerolinias အာဂျင်တီးနားအထုပ်။ အားလုံးကိုယ့်မျိုးနွယ်အပေါ်နှေးကွေးဖို့ speedbrake လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အခါ, ကလေယာဉ်ပျံနှေးကွေးပါဘူး မှလွဲ. ကြီးလှ၏။ ဒါဟာအပြည့်အဝလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မပေမယ့်မြန်နှုန်းအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံရသည်။ ဒါ့အပြင်နိမ့်ဆုံးပျင်းရိဒါထိန်းချုပ်မှုမှအတော်လေးလှည်ဆင်းမြန်နှုန်းရှာတွေ့န်းကျင် 31% မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုကျော်လွှားဖို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်မဆိုအတှေးသို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့သည်အလွန် apreciated မည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: fmartinez
0.286 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်